OT'U ESI EME KA OLU NKE VIDIO N 'INTANET - ỌRỤ NTANETỊ - 2019
Okwado onye inyeaka dị mkpa iji nyocha akwụkwọ ngwa ngwa na ngwa ngwa. Otu ngwọta dị otú ahụ bụ Scan Corrector A4. Ọ na-enye gị ohere igbanwe faịlụ ahụ iji meziwanye ọdịdị ya. Iji mee nke a, jiri agba, nchapụta na ọdịiche.
Ọ dị mkpa na usoro ihe omume ahụ ga-ezipụta ókèala ebe a na-enyocha. Ọ dị mkpa itinye akọrọ n'akụkụ ọrụ "Jupụta". Ya mere, nyocha ahụ ga-arụ ọrụ n'ozuzu A4 zuru oke, ma ọ bụghị ya, a ga-agbagọ ọdịiche.
Icheta ihe oyiyi
Scan Corrector A4 Mfe na - eburu faịlụ 10 banye na faịlụ. Iji họrọ oyiyi achọrọ, ọ dịghị mkpa iji zọpụta ha na kọmputa gị.
Ndozi ngwa ngwa
Ihe oyiyi ahụ a na-enyo enyo nwere ike idozi ngwa ngwa. Maka ọdịdị dị mma nke ọdịdị ahụ, enwere ọrụ "Ihè" na "Ntugharị", yana nhọrọ nke "Ndozi Ntuziaka", "dị nro" na "Mgbanwe".
Ịba uru Scan Corrector A4 emeziri maka nlezianya nke akwụkwọ na mgbazi ha. Uru ya bụ obere olu nke ngwungwu ngwanrọ zuru ezu, ibipụta ma ọ bụ ịchekwa faịlụ na kọmputa na ike ilele faịlụ ndị a na-enyocha.
1. asụsụ Russian interface;
2. Ọ dịghị mkpa ịwụnye na usoro ahụ;
3. obere obere nke ngwugwu zuru ezu;
4. Ọ dị mfe igwu okwu.
1. Ọ dị mkpa ịnyegharị faịlụ ahụ oge ọ bụla, ma ọ bụghị na nke mbụ aga-edegharị.
Download Scan Corrector A4 maka n'efu
Nchịkọta akụkọ nyocha Mmemme maka ederede edetu ederede CanoScan Toolbox Akwukwo
Scan Corrector A4 - bụ usoro dị mfe ma dị irè iji jiri ngwa ngwa nyochaa akwụkwọ na ihe oyiyi na ikike iji melite ogo ha.
Onye Mmepụta: Pankratiev D.